Tsvaga akanakisa ma Chromebook aunogona kutora - tsvaga yakanakisa Chrome OS laptop yako uye ubate zvakawanda
Unoda yakareruka, yakachipa-mutengo laptop iyo inongoshanda? Iwo akanakisa ma Chromebook ave kuita senge anoshanda kushandisa zuva nezuva-zuva seyakajairwa Windows Laptop kana MacBook uye ivo vanowanzo kuve vasinganyanyo fussy kushandisa zvakare. Iwo akanakisa ma Chromebook akakosha semalaptop makuru evana nevadzidzi, zvakare, kunyanya sezvo munhu wese anotanga kudzidza kubva kumba zvakanyanya.
Pazasi, iwe unowana yedu yazvino sarudza yeakanakisa maCbookbook ekutenga, kubva kune yakasarudzika Google Pixelbook Enda kune zvakachipa sarudzo kubva kuHP neAcer. Asi kutanga, matipi mashoma pane izvo zvaunofanira kutsvaga kana uchitenga malaptop anoenderana neChannel OS nekuti pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kufunga nezvazvo.
VERENGA NEXT: Aya ndiwo akanakisa Chromebook madhiri
Ungasarudza sei yakanakisa Chromebook yako
Chii chinonzi Chromebook uye Chrome OS inoshanda sei?
Chromebook inomhanya Chrome OS, inova yakabviswa-pasi yekushandisa sisitimu yakagadzirwa neGoogle. Kana iwe wakamboshandisa Google Chrome, iwe unenge uchinyanyo ziva mashandiro anoita Chrome OS: Chrome OS yakangofanana neiyo Chrome webhu bhurawuza isu tese tinoziva nayo kunze kwemamwe mashoma mabhero uye muridzo unokandwa mukati, senge faira browser, yeapplication menyu uye Google Mubatsiri. Chaizvoizvo, hapana yekudzidzira curve; Chrome OS iri nyore kwazvo kusvika pakubata nayo.
Panzvimbo pekushandisa zvakajairika desktop desktop, iwe unenge uchishandisa Google yakanakisa webhu-based suite yemapurogiramu. Izvi zvinosanganisira maGwaro ekugadziriswa kweshoko, maSpredishiti emaSpredishiti uye maSiraidhi emharidzo. Iwe unenge uchichengetera yakawanda yezvinhu zvako online, zvichireva kuti shanduko dzese dzaunoita dzino chengetwa otomatiki Iwe uchazoda inoramba iripo internet yekubatanidza kuti unyatso kushandisa iyo Chrome OS, asi zvimwe maficha - ese ataurwa pamusoro Google Apps, semuenzaniso - ita shanda isingaenzaniswi futi, iyo iri nyore kana zvikaitika. Chero shanduko dzaunoita dzinongoenderana kumashure kumafaira epamhepo paunotangazve.
VERENGA NEXT: Sevha mari neyakagadziridzwa laptop
Ndezvipi zvimwe zvandingaite neChbookbook?
Mazuva ano mubvunzo wakanyatsokodzera kubvunza ungave izvo zvausingakwanise kumhanya nekuti kune hupfumi hwesarudzo dzinowanikwa kune ano Chromebook mushandisi. Panyaya yewebhu-based apps, unogona kumhanyisa ese maturusi izvozvi pane Chromebook, kunyangwe zvinhu zvepamberi senge RAW yekugadzirisa mifananidzo uye kuumbiridza. Zvirongwa zvakaita porr or Pixlr Editor ese makuru sarudzo uye zvinoshamisa anokwanisa.
Chromebook dzese dzine madoko eUSB uye vamwe vanotova nemakadhi e SD / microSD, kuti iwe ugone kuendesa midhiya yako uye zvinyorwa zvakapoterera senge pane yakajairwa laptop.
Kunyangwe iwe usingakwanise kuwana webhu-based app inoenderana nezvinodiwa zvako, hapana chikonzero chekufunganya. Mazuva ano iwe unogona zvakare kumhanyisa Android maapplication pane Chromebook. Ingo tsvaga iyo Google Play Chitoro uye iwe unowana hupfumi hwemaapplication ekuisa uye kumhanya, kusanganisira akati wandei mitambo uye yako ese aunofarira smartphone software.
Chekupedzisira, kana izvo zvisina kukwana (uye kana iwe uchinzwa uine chivimbo) unogona kuisa nekumhanyisa Linux pane Chromebook, zvichireva kuti iwe unogona kumhanya izere-mafuta desktop desktop, zvakare. Kuti uwane zvimwe nezve maitiro ekuita izvi, verenga yedu Chromebook Linux yekuisa gwara.
Chii chandinofanira kutarisa kana ndichitenga Chromebook?
Kune ese marudzi ese ezvinhu zvekutarisa kana uchiita yako Chromebook kutenga. Kutanga, zvakakosha kuyeuka kuti Chrome OS yakarongedzwa senge yakaderera-inofambisa sisitimu yekushandisa, mukuti haina kuda ekumusoro-kumagumo mamaki ekumhanya. Nekuda kweizvi, haudi muchina wakasimudzwa kuti umhanye uye nekudaro unogona kuchengetedza mari yakawanda.
Iwe unofanirwa kutarisa kukura uye uremu; kazhinji kazhinji kwete, Chromebook inoshanda sechinhu chechipiri chauchange uchishandisa kana uchimhanya mukati nekubuda muhofisi. Nekuda kwemusana wako, zviri nani kuwana chimwe chinhu chakareruka. Patsamba iyoyo, kuvaka mhando kwakakoshawo zvakafanana, uye maChannelbook ari kuramba achienda kure kubva kune akaumbika, zvigadzirwa zvepurasitiki zvekare.
Chechipiri, kuratidzwa kwakadzikama kwakakosha. Mushure mezvose, iwe unenge uchitarisa pachiratidziro nguva yese yaunenge uchiishandisa. Tarisa uone maChannelbook ane Full HD IPS skrini sezvo izvi zvinowanzo kupa yakanakisa yemhando yemhando.
Akanakisa Chromebook ekutenga
1.Google Pixelbook Go: Ingori yakanakisa Chromebook iripo
Google yakairovera kunze kwepaki payakagadzira iyo yekutanga Pixelbook asi iyo yekutevera inotonyanya kushamisa. Iyo Pixelbook Go yakanyanya kuderera, yakajeka mwenje uye ine imwe yemakona akanakisa pane chero laptop yatakamboedza. Couple iyo ine yakadzikama 13.3in 1080p yekubata skrini uye hukuru hupenyu hwebhatiri uye iwe unayo imwe yeakanakisa malaptop ayo anogona kutenga pazasi pamutengo.
Dambudziko chete - kana iwe ukakwanisa kuridaidza iro - nderekuti iyo Pixelbook Go haishandise iyo yazvino 10th chizvarwa Intel CPUs. Panzvimbo iyoyo, iyo modhi yatakayedza yaive nechisere-chizvarwa Core i5, 8GB ye RAM uye 128GB yekuchengetedza. Nekudaro, ichiri kukurumidza zvakakwana uye kupindura chero chaungangoda kuishandisa uye, iine Chrome OS ichikura zvakanaka, inokwanisa kukwana kuti ishandiswe semushini wako mukuru. Uye kana iwe uchida chimwe chinhu chakatonyanya kusimba uye choumbozha unogona kusarudza iyo Core i7 modhi, iyo inouya neyakaipisisa 4K kuratidza.
Kana iwe watoedza Chrome OS uye uchida kunamatira nayo, iyi ndiyo nhanho yakasikwa kumusoro kubva kumamirioni anodhura michina pamusika. Zvinongo penya.
Verenga zvakakwana Google Pixelbook Go ongorora nokuti zvakawanda
Processor: Dual-core 1.3GHz Intel Core i5-8200Y (dzimwe sarudzo dziripo) Screen resolution: 1,920 x 1,080
RAM: 8GB (dzimwe sarudzo dziripo) uremu: 1.06kg
Yese yekuchengetera: 128GB SSD (dzimwe sarudzo dziripo)
Pixelbook Go 13.3, FHD Laptop (Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD)
Google Pixelbook Go - Lightweight Chromebook Laptop - Kusvikira maawa gumi nemaviri Bhatiri Hupenyu  - Bata Screen Screenbookbook - Ingori Nhema
$849.00 Tenga izvozvi
2.Asus Chromebook Flip C436F: Iyo inokurumidza Chromebook kare
Price: £ 699 | Tenga izvozvi kubva kuCurrys PC Nyika
Kana iyo Google Pixelbook Go iri yedu inodikanwa Chromebook yenguva dzese, iyo Asus Chromebook Flip C436F inoimhanyisa chaizvo padyo. Iine 10th-gen Intel Core i5 CPU pachigaro, pamwe chete ne8GB ye RAM uye 256GB SSD, ndiyo inokurumidza Chromebook yatakamboedza uye chinhu chinofadza kushandisa futi.
Iyo ine isinganzwisisike yakatetepa uye yakapfava chassis uye yakakura 14in 1,920 x 1,080 inoratidzira, inorema kungori 1.2kg uye, senge Asus 'mamwe maFlip zvishandiso, ine 360-degree hinge iyo inokutendera iwe kupeta kuratidzira munzira yese kutenderera. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kushandisa iyo laptop sehwendefa, kana kungo tuck iyo keyboard pasi nekunze kwenzira, kuunza iyo skrini padhuze nemeso ako kana iwe uchiona mafirimu neTV.
Iyo iri, zvakapusa, yakajeka Chromebook uye inokodzera kufunga pamusoro pemutengo wakafanana Windows 10 muchina. Tarisa uone kuongorora kwedu kuzere munguva pfupi.
Processor: 10th gen Intel Core i5-10210U Screen resolution: 1,920 x 1,080
RAM: 8GB DDR4 uremu: 1.2kg
Yese yekuchengetera: 256GB SSD
3. Dell Chromebook 11 3100 2-in-1: Iyo yakanakisa Chromebook yehupenyu hwebhatiri
Price: Kubva pamari makumi matanhatu neshanu | Tenga izvozvi kubva kuna Dell
Iyo Dell Chromebook 11 3100 2-in-1 yakagadzirirwa nezvikoro mupfungwa, saka iyo yekubata yerabha dhizaini uye chunkier-kupfuura-zvakajairika dhizaini. Usarega izvo zvichikuisa pakutenga imwe, zvakadaro, nekuti isarudzo yakanaka.
Sezvo nemazhinji-mu-2 michina iwe unogona kuushandisa munzira dzakasiyana siyana: senge palaptop, dhijitari flipboard kana piritsi (kunyangwe iri bata inorema kune yekupedzisira). Nekuti yakagadzirirwa nharaunda yechikoro yakanyanya kuomarara: Gorilla Girazi rinopfeka chiratidziro, iyo keyboard ndeye spill-proof uye Dell anoti yakaedzwa kupfuura zvakajairwa MIL-STD zviyero, futi.
Chiratidziro chidiki padivi diki pa11.6in uye haisi iyo yakanyanya kunaka yatakaona asi ipaneru reIPS saka maangoni ekuona akanaka. Kune zvekare simba rakawanda rekupa uye, mumiyedzo yedu, hupenyu hwebhatiri hwe3100 hwakaratidza kuve hwakajeka, hunogara angangoita maawa mapfumbamwe ekutamba kwevhidhiyo. Pakazara, sarudzo yakanaka kwazvo, kunyanya kana vana vako vachida kutyora zvinhu.
Verenga zvakakwana Dell Chromebook 11 3100 2-in-1 ongororo nokuti zvakawanda
Processor: 2.6GHz Dual-musimboti Intel Celeron N4000 Screen resolution: 1,366 x 768
RAM: 4GB DDR4 uremu: 1.41kg
Yese yekuchengetera: 32GB eMMC
4. Acer Chromebook 14 CB514: Iyo yakanakisa Chromebook iri pasi pe £ 500
Price: £ 456 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Iyo Acer Chromebook 14 CB514 ndeye premium laptop iyo neimwe nzira inokwanisa kutengesa pasi pe £ 350. Sei? Zvakanaka, processor - iyo mbiri-musimboti 1.1GHz Intel Celeron N3350 - iri kuramba ichienderera kwemakore matatu, kwekutanga. Asi kunze kwekunge iwe uchida kuenda unorema pane multitasking kana kupaza muApple maapplication, ungangove hauzobatirirwa zvakare nazvo.
Iko Chromebook 14 CB514 inonyanya kunyanyisa ine zvigadzirwa zvayo. Iyo keyboard uye touchpad inonzwa yakakodzera premium, ichipa kunyepedzera kwekubhurawuza pane inodhura zvakanyanya MacBook. Izvo zvinoita kuti zvive zvinofadza kushandisa, sekureba sekushandisa kwako kusingaendi zvakanyanya kupfuura maemail, maspredishiti neGoogle Docs…
Verenga zvakakwana Acer Chromebook 14 CB514 kuongorora nokuti zvakawanda
Processor: Dual-musimboti 1.1GHz Intel Celeron N3350 Screen resolution: 1,920 x 1,080
RAM: 4GB uremu: 1.5kg
Yese yekuchengetera: 32GB
Acer Chromebook 14 CB514-1HT - (Intel Pentium N4200, 4GB RAM, 128GB eMMC, 14 inch Yakazara HD inobata skrini yekuratidzira, Chrome OS, Goridhe)
£ 454.50 Tenga izvozvi
5. Acer Chromebook 714: Simba rakawanda uye skrini hombe kubhutsu
Price: £ 467 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Chromebook inowanzo kukanganisa padivi diki kune iyo yakawanda chikamu asi, kana iwe uchida kushanda pane yakakura skrini, iyo Acer Chromebook 714 isarudzo yakanaka. Iyo ine yakapinza Yakazara HD, 1,920 x 1,080 IPS inoratidzira ine yakadzikama yekuona angles, 4GB kana 8GB ye RAM uye inouya neine Core i3 kana Core i5 8th-gen Intel CPU. Kune zvakare 64GB kana 128GB yekuchengetera, kunyangwe ichingova eMMC flash yekuchengetedza saka kubata kune inononoka divi.
Iyo laputopu inovaka inonzwa zvishoma padivi rakashata uye, pamutengo uyu, kupenya uye kunyatso kujeka kwechiratidziro kunogona kuve kuri nani. Zvatataura izvozvo, mashandiro akanaka, iyo laptop inonzwa yakanaka uye inoteerera uye hupenyu hwebhatiri hunoshamisa kwazvo, hunogara anopfuura maawa gumi nemaviri ekutamba kwevhidhiyo mune yedu bhenji bvunzo.
Verenga zvakakwana Acer Chromebook 714 ongororo nokuti zvakawanda
Processor: Quad-core Intel Core i3 kana i5 (8th gen) Screen resolution: 1,920 x 1,080
RAM: 4GB kana 8GB DDR4 uremu: 1.6kg
Yese yekuchengetera: 64GB kana 128GB eMMc
Acer Chromebook 714 CB714-1W (Intel Core i3-8130U, 8GB RAM, 128GB eMMC, 14 inch Yakazara HD Ratidza, Chrome OS, Iron) NX.HAYEK.007
£ 489.96 Tenga izvozvi
Yakanakisa laputopu yevana 2021: Iwo akanakisa emabhuku-ane hunyorwa mabhuku emabhuku ebasa nekutamba